Telefoonada ZTE ayaa hada heli kara warar cusub | Androidsis
Shalay waxaan kuu sheegnay in shirkadda ZTE lagu qasbay inay joojiso howlaheeda ganacsi taas oo ka dhalatay go'doominta ay shirkaddu ku hayso Mareykanka. Waxaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda Halkan. Shirkadda Shiinaha ayaa joojisay iibinta taleefannadeeda, taas oo lafteeda dhibaato weyn ku ah sii jiritaankeeda muddada dhexe iyo tan fog. Hadda, dhibaatooyinku waxay u yimaadaan isticmaaleyaasha.
Sababtoo ah dhammaan kuwa adeegsada taleefanka ZTE ma awoodi doonaan inay cusbooneysiiyaan taleefankooda. Waa hal tallaabo oo dheeri ah oo shirkadda ay isku dayayso inay si buuxda u curyaamiso howlaheeda. Sidaas cusbooneysiinta ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay go'aankan.
Midkoodna taleefannada ZTE ee suuqa yaalla maanta suurtagal ma ahan in kor loo qaado. Haddii ay isku dayaan inay cusbooneysiiyaan si caadi ah, waxay helayaan farriin sheegeysa inaysan jirin shabakad la heli karo. Sidoo kale, haddii aad isku daydo inaad cusboonaysiiso adoo raadinaya cusbooneysiinta khadka tooska ah, kuma xirmi kartid server-ka shirkadda. Sidaa darteed, waa wax aan macquul aheyn in la cusbooneysiiyo.
Waxay u muuqataa in la yiri Adeegyada cusbooneysiinta qalabka ZTE waa amar la'aan. Waxyaabaha imanaya ka dib markay shirkaddu ku dhawaaqdo joojinta ganacsigan. Markaa wax iska dhaca ma aha.
Maxaa dhacaya ayaa ah in sidoo kale dadka isticmaala taleefanka ee soo saaraha Shiinaha ay hadda dhibaato qabaan. Tan iyo xitaa haddii ay leeyihiin qalab dhowaan, umuuqato inaysan jirin wax fursad ah oo lagu helo cusbooneysiinta. Midkoodna amniga. Wax khatar weyn ku keenaya.
ZTE weli wax kama oran go'aankaan. Ma ogin inay sida ugu dhaqsaha badan u sameyn doonaan, in kasta oo xaaladdu u muuqato mid aan aad ugu fiicnayn shirkadda. Waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ogaanno maalmaha soo socda. In kasta oo maalin walba xaaladdu u muuqato mid ka sii daraysa. Waan idinla socodsiin doonaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Mar dambe suurtagal maahan in la cusbooneysiiyo taleefannada ZTE
Nacalaa Donald Trump… ..
Jawaab Sandra E Perez Lopez